पर्यटन र स्वच्छता- विचार - कान्तिपुर समाचार
पर्यटन र स्वच्छता
जेष्ठ १, २०७९ मञ्जु भट्ट
सन् २०१६ मा अमेरिकाका प्रख्यात विश्वविद्यालय कोलम्बिया र येलको संयुक्त अध्ययन अनुसार फिनल्यान्ड संसारकै सबैभन्दा सफा र बसोबासका लागि उत्तम देश मानिएको थियो ।
यो वर्ष फेरि यहाँका जनता विश्वमै खुसी हुनेमा पहिलो नम्बरमा परेका छन् । त्यतिखेर यो देशको वातावरणीय स्वच्छता मापन अंक ९०.६८ थियो । अनुसन्धान अनुसार यहाँको हावामा प्रदूषणको मात्रा एकदमै थोरै भएकाले बिरामी पर्ने सम्भावना पनि कम छ । दोस्रो सफा देश आइसल्यान्डमा भने वनजंगल निकै कम हुँदा पनि वातावरण स्वच्छ छ । सन् २००७ देखि त्यहाँ सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्न दिइएको थिएन, यसले पनि वायु प्रदूषण घटायो । स्विडेन, डेनमार्क, स्लोभानिया, स्पेन, पोर्चुगल, इस्टोनिया, माल्टा तथा फ्रान्स विश्वकै सफा देशभित्र पर्छन् । माल्टा क्षेत्रफलका हिसाबले धेरै सानो भए पनि विश्वकै बढी जनघनत्व भएको देश हो, पर्यटकीय गन्तव्यका लागि पनि यो प्रख्यात छ । फ्रान्स धेरै उद्योग भएको देशमा पर्छ, तैपनि वातावरणिय स्वच्छता मापन अंक ८८.२० छ ।
कुनै पनि देशको स्वच्छता मापन गर्न हावामा रहेको प्रदूषण, पानीको स्वच्छता, वनजंगल, हावापानी, सरसफाइको अवस्था, जैविक विविधता तथा बासस्थानको अवस्थाको अध्ययन गरिन्छ । क्षेत्रफलको हिसाबले साना यी देशहरूमा धेरै कुराको अभाव भए पनि वातावरणीय स्वच्छतामा धेरै अगाडि छन् । जैविक विविधताले भरिपूर्ण नेपाल पनि यी देशका तुलनामा अझै अगाडि हुनुपर्ने हो । तर सधैंभरिको राजनीतिक खिचातानी≤ कुशल नेतृत्वको अभाव≤ नेतृत्व तहमा रहेकाहरूमा देशहितभन्दा ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ’ भन्ने सोच र योजनाविहीन विकासका कारण सरकारी प्रणाली तहसनहस हुन पुगेको छ ।
विश्वकै तेस्रो सफा देशको सूचीमा रहेको स्विडेनले उत्पादन हुने फोहोरलाई पुनः प्रशोधन गर्छ, यसका लागि फोहोर आयात पनि गर्ने गर्छ । अमेरिका तथा युरोपका कतिपय देशमा बाटामा फोहोर फाल्ने तथा थुक्नेलाई कडा जरिवाना हुन्छ । त्यहाँ बाटामा थुक्ने वा फोहोर फाल्ने व्यक्तिलाई असभ्य मानिन्छ । नेपालका सहरहरूमा फोहोर व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै छ । सार्वजनिक स्थानमा धूमपान निषेध गरिए पनि, धूवाँ उडाउनेहरूको कमी छैन । माथि चर्चा गरिएका देशहरू सफा रहन सक्नुको अर्को मुख्य कारण हो— फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नियम पालन नगर्नेलाई दिइने कडा सजाय ।
नेपाल पनि पर्यटकीय हिसाबमा समृद्ध छ, बर्सेनि हजारौंको संख्यामा पर्यटक भित्रिन्छन्, तर यो समयमा काठमाडौं घुम्न आएका पर्यटकहरूलाई फोहोरले स्वागत गरिरहेको छ । हाम्रा सडकहरू पनि सफा छैनन् । संघीय राजधानीबाहिरका लुम्बिनी, नेपालगन्ज, विराटनगरजस्ता मुख्य सहरलाई पनि फोहोर र धूलोले आक्रान्त बनाएको छ । कहिले हिलाम्मे त कहिले धूलाम्मे राजधानीका सडकमा पैदल हिँड्न रुचाउने विदेशी पर्यटकहरूलाई सकसै पर्छ ।
गाउँघरमा फोहोरको समस्या त्यति नभए पनि सहरमा यसले विकराल रूप लिएको छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै सवारीसाधनको धूवाँ र यसबाट हुने प्रदूषण पनि बढिरहेको छ । सडकमा खाल्डाखुल्डी पनि त्यत्तिकै छन् । त्यस्तै प्रायः नागरिक चेतनशील छैनन् । आफूले उत्पन्न गरेको फोहोर मनलाग्दी फालिदिन्छन् । जता गए पनि आफूले उत्पादन गरेको फोहोर एउटा सानो झोलामा जम्मा गरेर नजिकैका डस्टबिनमा फाल्न सकिन्छ । डस्टबिन छैन भने, आफूसँगै बोकेर घरमा ल्याई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । वातावरणलाई कसरी सफा राख्ने भन्ने बेलैमा मनन गरेर यस्ता ससाना कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, सार्वजनिक स्थानमा डस्टबिनको संख्या बढाउन सरकारले पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । अति व्यस्त ठाउँहरूमा त झन् डस्टबिन अपरिहार्य छ । योबाहेक फोहोर व्यवस्थापनको दिगो उपायका लागि पनि सरकारी संस्थाहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।
प्रकृतिमैत्री विकास योजना अनुरूप काम हुन सकेको छैन । सडक विस्तारका नाममा धमाधम रूखहरू काटिन्छन् तर रूख रोप्ने तथा हुर्काउने विषयमा त्यति ध्यान दिइँदैन । एउटा रूख हुर्कन निकै समय लाग्छ, त्यसैले रूख काट्नुअघि धेरै विचार गर्नुपर्छ । विकसित देशहरूमा रूखहरू जरैसहित उखालेर अन्यत्र सारिन्छ । प्रकृति जोगाउन यस्तो तरिका हामीले पनि अपनाउनुपर्छ । कोभिड महामारी कम हुँदै गर्दा, आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको संख्या बढिरहेको छ, यो सकारात्मक पक्षलाई ध्यानमा राखेर पर्यटकीय स्थलको प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । स्वच्छ वातावरणसँग पर्यटन उद्योगको सम्बन्ध सोझो हुन्छ । जति स्वच्छ वातावरण, त्यति नै पर्यटकको संख्या र बसाइ अवधि पनि बढ्दै जान्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७९ ०७:०५
भाषण होइन, काम
वैशाख १९, २०७९ मञ्जु भट्ट
स्थानीय तहको चुनाव आउन धेरै दिन बाँकी छैन । कतिपय व्यक्ति चुनावकै लागि गाउँघर फर्किन थालेका छन् । उम्मेदवारहरू पनि प्रचार–प्रसारमा जुटिरहेका छन् । तर, चुनावमा महिला उम्मेदवार भने निकै कम छन् । पुरुषभन्दा महिला बढी भएको देशको महिला उम्मेदवार नै कम हुनु चिन्ताजनक छ । स्थानीय तहको मुख्य पदमा पुरुषहरू नै बढी छन् । यसपालि चुनावमा पनि प्रमुख पदहरूमा उनीहरूकै हालीमुहाली हुनेमा शंकै छैन । अपवादबाहेक अहिलेसम्म महिलालाई उपप्रमुख–उपाध्यक्ष र वडा सदस्यमै सीमित गरिएको छ । महिला राजनीतिमा अगाडि बढ्न सके महिला समुदायका पीडाहरू यसै हटेर जानेछन् ।
सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा अघिल्लो चुनावमा ‘छाउगोठ र छाउ प्रथा हटाउँछु’ भन्दै भोट माग्नेहरू अचेल यो विषयमा चुइँक्कै बोलेको सुनिँदैन । केही समयअघि प्रहरीकै सक्रियता बलजफ्ती सयौं छाउगोठ भत्काइए ।
महिनावारी भएको बेला घरमा सुत्न नपाउने महिलाहरूलाई के अब ओडारबाट मूलघरमा ल्याउन सकिन्छ ? छाउगोठ भत्किएपछि, सुत्केरी नाबालकसहित ओडारमा सुत्न बाध्न हुनुपरेको छ । स्थानीय तहले यस्तो बेला के गर्ला ? पोषिलो खानाबाट वञ्चित महिलाहरूले नै खेतमा गएर डल्ला फुटाउनु, गाईभैंसीको गह्रुंगो मल पीठमा बोकेर खेतसम्म पुर्‍याउनुजस्ता काम गर्नुपरिरहेको छ, के उनीहरूको पीडा स्थानीय जनप्रतिनिधिले बुझ्न सक्लान् ? महिनावारी भएको बेला गह्रुंगो भारी बोकेर पाठेघर खसेका महिलाको दुःख महसुस गर्न सक्लान् ? महिनावारी हुँदा कम्तीमा चार दिन छात्राहरू विद्यालय जान वञ्चित छन्, तिनको पढाइ नियमित गर्न सक्लान् ? महिनावारी भएको बेला मठमन्दिर, बिहे, व्रतबन्ध, चाडबाडमा रमाउन बन्देज लगाइन्छ; त्यसकै कारण कुनामा बसेर आँसुका धारा बगाउन महिलाहरू बाध्य छन्; के तिनको आँसु पुछ्न सक्लान् ? अन्धविश्वासबाट बाहिर निकालेर उनीहरूलाई खुसीमा सामेल गराउन सक्लान् ?
समयमै काम पूरा नगर्दा गाउँ पुग्ने कच्ची, साँघुरा सडकहरूमा दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएकाहरूका परिवारको आँसु रोक्न सक्लान् ? सुत्केरी व्यथा लागेपछि अस्पताल नपुग्दै बाटामै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् महिलाहरू, के तिनका अप्ठेराहरू कम होलान् ? सामान्य औषधि–उपचार नपाएर घण्टौंसम्म दुखाइ सहँदै बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य होला ? यातायात–एम्बुलेन्सको अभावमा ज्यान गुमाउनेहरूको पीडा कम होला ? घरनजिकै सुविधासम्पन्न अस्पताल, सुरक्षित सडक पुर्‍याउन सक्लान् ? अहिले पनि देशका दूरदराजमा टुकीको सहायतामा पढिन्छ । रक्सीको लतमा लागेका श्रीमान्ले दिएको यातना सहन नसकी दैलेखकी सुकी बडुवालले चार छोराछोरीसहित नदीमा हाम फालेको दुई वर्ष भयो । यीजस्तै नदीमा हाम फाल्न बाध्य अरू महिलाको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्लान्, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले ? बाँच्नका लागि चाहिने गाँस, बास र कपासको मात्रै पनि व्यवस्था गर्न सक्लान् ?
सरकारले २० वर्षमुनिको विवाहलाई गैरकानुनी भनेको छ । तैपनि अघिल्लो वर्ष सुदूरपश्चिमका स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउने महिलाहरूमध्ये ११ प्रतिशत २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएको पाइएको थियो । खेल्ने वा लेख्ने–पढ्ने उमेरमा गर्भवती भई बालबच्चाको हेरचाहमै जीवन व्यतीत गर्न बाध्य महिलाहरूका पीडा जनप्रतिनिधिले सम्बोधन गर्न सक्लान् ?
कतिपय पालिकामा चुनावअघि साडी र अन्य सामग्री बाँड्दै गरेको समाचार आयो । के उम्मेदवारहरूले चुनावपछि दुर्गमका कतिपय महिला तथा छोराछोरीले कैयौं दिनसम्म एकसरो लुगामा जीवन धानेको वास्तविकता मनन गर्न सक्लान् ? गाउँदेखि सहरसम्मै अन्धविश्वासले जरा गाड्दा, बेलाबेलामा बोक्सी आरोपमा कुटिइने महिला, एसिड आक्रमणमा पर्ने किशोरीहरू, विद्यालय–कलेज तथा खेतमा बलात्कृत हुनेहरू के समाजमा निडरताका साथ हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्लान् ? वृद्ध–बिरामी आमाबुबा, कलिला छोराछोरी, श्रीमती छाडेर बिदेसिने युवाहरूलाई स्थानीय स्तरमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्लान् ? घण्टौं लगाएर एक गाग्री पानी ल्याउने महिलाको सास्ती बुझ्लान् ? राम्रो विद्यालयमा पढाउन छोराछोरी बोकेर सहर पस्नेहरूले के अब गाउँघरमै गुणस्तरीय शिक्षा पाउलान् ?
अहिले पनि दुर्गमका गाउँघरमा पितृसत्तात्मक सोचले जरा गाडेको छ । चुलोचौकाको काम महिलाको मात्रै हो, पुरुषहरूले बाहिरको काम मात्रै गर्नुपर्छ, घरायसी काममा श्रीमतीलाई मद्दत गर्दा पाप लाग्छ भन्नेजस्ता मान्यता हटाउन जनप्रतिनिधिहरूले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । भाषण मात्र होइन, काम पनि गरेर देखाउनुपर्छ । परिवर्तनको सुरुआत आफैंबाट गर्नुपर्छ । महिलाले पनि खेत जोत्न, पढाउन, जागिर खान थालिसकेको अवस्थामा पुरुषले पनि भान्छामा गएर जुठा भाँडा माझ्न अप्ठेरो मान्नु हुँदैन । घरमा एक्लै बालबच्चा, वृद्धवृद्धाको हेरविचारसँगै खेतमा फल उब्जाउन संघर्ष गरिरहेका महिलाका पीडा बुझ्दै युवाहरूलाई गाउँघरमै रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता कामका लागि अहिलेका उम्मेदवारहरूसँग योजना हुनु आवश्यक छ ।
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७९ ०८:२४